Isungulwe ngonyaka we-1996, i-Chengdu Mind Golden Card System Co., Ltd. ingumkhiqizi oholayo owaziwa ngokuklama, ukucwaninga, ukukhiqiza nokuthengisa amakhadi wekhadi we-RFID, ikhadi le-Mifare nokusondela, i-Rfid Label / izitika, Imininingwane yamakhadi we-IC chip, umugqa kazibuthe amakhadi okhiye wehhotela, amakhadi e-PVC ID, umfundi / ababhali abahlobene nemikhiqizo ye-Industrial IOT DTU / RTU.
Isisekelo sethu sokukhiqiza i-Chengdu Mind Internet of things Technology Co, Ltd. itholakala eChengdu, entshonalanga yeChina ngesikali sokukhiqiza esingamamitha-skwele ayi-20,000 nemigqa engu-6 yokukhiqiza yesimanje kanye ne-ISO9001, iROHS ifanelekile.
I-MIND ingukuphela kommeli we-ALIEN eNtshonalanga yeChina futhi sisebenza futhi kuvaliwe nge-NXP / IMPINJ / ATMEL / FUDAN iminyaka.
Umthamo wethu waminyaka yonke ungamakhadi asondelene we-Rfid ayisigidi esingu-150, amakhadi we-PVC ayizigidi eziyi-120 namakhadi we-IC chip, i-Rfid label / sticker namamaki we-Rfid ayizigidi eziyi-100 (njengethegi ye-nfc, ukhiye we-keyfob, ibhande lesandla, ithegi yokuwasha, ithegi yendwangu njll).
Imikhiqizo YENGQONDO isetshenziswa kabanzi ohlelweni lokukhiya amahhotela, isilawuli sokufinyelela, ukukhonjwa komzimba, ukutadisha, ezokuthutha, impahla, izingubo nezinye izinkambu.
IMIKHANGO YENGQONDO ithunyelwa kakhulu e-USA, Canada, i-Europe, i-Asia futhi idume ngemisebenzi yobuciko esezingeni lokuqala, ikhwalithi engaguquki, intengo yokuncintisana kakhulu, iphakethe elihle nokulethwa okusheshayo.
Sinikezela ngezinsizakalo ze-OEM futhi sihlinzeka nge-R & D nokusekelwa kobuchwepheshe. Siyakwamukela oda ngezifiso.
Kuyo yonke imikhiqizo esiyikhiqizile, isiqiniseko se-MIND ngesikhathi sokulethwa nesikhathi seminyaka emi-2 sewaranti.
Nikeza ngemikhiqizo esezingeni ukuhlangabezana nezicelo ezenziwe ngezifiso zamakhasimende ethu
Dala izinhlelo zokusebenza ezihlakaniphile eziningi zekhadi
Qhubeka uthuthukise uhlelo lokusebenza oluhlakaniphile lwekhadi elidaliwe
Iqanjwe kabusha: Uhlelo lwekhadi legolide leChengdu Mind co. ltd, gxila kumakhadi we-RFID business.Company move to Nanguang building.
Ngenisa ulayini wokuqala wokukhiqiza eChengdu.
Khulisa kabili isikali sefektri, ukungenisa imishini emisha namandla omnyaka kufinyelela kumakhadi ayizigidi ezingama-80.
Uthenge ihhovisi maphakathi nedolobha: 5A CBD - iplaza yaseDongfang.
Iya kumhlangano wokuzakhela: IPHEPHA lobuchwepheshe be-MIND, ifektri engama-20000 square factory enesitifiketi se-ISO.
Gxila ekuthuthukiseni ibhizinisi lamazwe omhlaba, imikhiqizo ye-MIND ithunyelwa emazweni angaphezu kwezi-50 nezifunda emhlabeni jikelele.
Yethula umugqa wokukhiqiza welebuli ohlanganisiwe we-rfid, yakha ilebhu yokuhlola ye-MIND ngesethi ephelele yemishini kufaka phakathi imishini yeVoyantic Tagformance pro RFID.
Ingqondo ngokuhlanganyela neChina Mobile, iHuawei neSichuan IOT, isungule ikomidi lesicelo le-NB IOT ukwakha uchungechunge lwezemvelo ekuthuthukiseni iSichuan IOT.
Faka imali futhi usungule i-Chengdu MIND Zhongsha Technology Co, gxila kwimikhiqizo ye-IOT R & D nokukhiqiza.
Iba yi-1 SKA eningizimu-ntshonalanga ye-Alibaba, bamba iqhaza ku-5 expo yamazwe omhlaba eFrance / USA / Dubai / Singarpore / India.
Tshala imali umugqa wokuqala wokukhiqiza emakethe waseJalimane iMuehlbauer TAL15000 rfid inlay entshonalanga yeChina.